Review : Nervous Conditions
Kudala ndisiva ngayo le ncwadi. Ndive abantu abakufuphi kum bethetha ngayo, beyincoma. No-Junot Diaz naye wakhe wayincoma kwenye iVideo endandiyibukele yakhe apho wayethetha ngencwadi azithandayo ezazibhalwe ngabasetyhini abamnyama!Wonke umntu end...
OntoVerbal : A Protégé plugin for verbalising ontology classes.
Njengokuba iimeko zibuthathaka kwizixhobo ezakhiweyo kwicala lee-ontoloji ezikwaziyo ukudilishana nelwimi zaBantu, kuyadingeka umntu ajonge izinto esele zisenziwa kwiilwimi ezifana nesiNgesi. Kukho izixhobo ezingcono kwezilwimi ngoba baninzi abant...
Review : We Need New Names
Because we were not in our country, we could not use our own languages, and so when we spoke our voices came out bruised.Le ncwadi kudala ndizimisele ukuyifunda. Ndiqale ukuva ngayo ngoku yayisandokuphuma, ndaqala ukuyifunda emva ndive lukhulu n...
Cooking an ontology
Elinye lamaphepha endicinga limnandi lithiywe lisenzisa i-ontology yokutya ekwakheni izivakalisi xa unikwe i-RDF data . Enye yezinto bendibawela ukuyazi yindlela abazikhe ngazo ezindlela zokupheka bathetha ngazo [1, p11]. Bandithumele kwiphepha...
Real versus Template-Based Natural Language Generation
Namhlanje siqwalasela umsebenzi ka Deenter, Krahmer kunye no-Theune. Bathu bafuna ukubonisa ukuba iisystems ezisebenzisa iitemplates xa zikhupha imibhalo nazo ziyakwazi ukukhuphisana neesystems ezisebenzisa iigrammar xa sijonga imaintanability, us...